Orodyahanka Somali-Britishka Mo Farah oo la shaaciyey inuusan isticmaalin Daroogo – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Orodyahanka Somali-Britishka Mo Farah oo la shaaciyey inuusan isticmaalin Daroogo
Hadal ka soo baxay Guddiga Ciyaaraha Fudud ee dalka Britain UK Athletics ( UKA) ayaa lagusheegay inuu Orodyahankaasi aanu isticmaalin Daawooyinka loo adeegsado Firfircoonida Murqaha,oo horey loogu eedeeyey inuu isticmaalo marka uu ka qeyb galayo Tartamada.
Mo Farah oo 32-jir ah waxa uu mar kale xaqiijiyey inuu nadiif ka yahay Eedeymaha lagu sheegay inuu Daroogooyin isticmaalo marka uu ka qeyb galayo orodka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay inaan wax caddaymo ah loo haynin Orodyahankaasi.
Xiriirka Ciyaaraha Fudud ee Britain (UKA) ayaa sheegtay inaysan daabici doonin Warbixinta oo dhamaystiran tan iyo inta laga qabanayo Ciyaaraha Fudud ee Caalamka oo bishan August 22-da ilaa 30-da lagu qaban doono caasimadda dalka Shiinaha ee Pejing.
Orod-yahan Mo Farah ayaa la filayaa inuu ka qeyb galo Tartankaasi, si uu u difaacdo Horyaalnimadiisa Orodka 5,000 mitir iyo 10,000 mitir.
Mo Farah waxa uu toddobaadkii hore ku guuleystay Tartanka Orodka ee 3,000 mitir oo lagu qabtay magaalladda London.
Dhinaca kale, Tababarajhaa Ciyaaryahankaasi oo lagu magacaabo Alberto Salazar ayaa waxaa bishii June ee la soo dhaafay lagu soo oogay inuu isticmaalo Darooyinkaasi, kadib, markii lagu ogaaday baaritaano la sameeyo inuu Tababaruhu isticmaalo Daroogadda.
Tababarahaasi ayaa laga joojiyey shaqada,waxaanaOrdodyahanMo farah layliya Tababare kale.
Dhageyso: warka subaxnimo Ee Radio Dalsan ,01-08-2015
La-taliye Maraykanka ugu qaabilsan Hawlgalladda Alshabaab oo booqasho ku jooga Muqdisho